White Aluminum Oxide - China Shanghai Bosun Marokoroko
Manasongadina ny karazana solon-abrasive.3 oxidation 2 aluminium (Al2O3) afa-po ny 98%, ary ny fanaovana toy ny misy vola kely ny ferric azôty, silisiôma azôty, appera fotsy. aluminium fotsy azôty karazana refractories kilasy ambony, no nanaovana ny avo lenta alumina amin'ny mitsonika ambony 2000 amin'ny aluminium azôty herimpo herinaratra Arc memy sy hihena. Tsy fotsy ny dingana lehibe alphaAl2O3 krystaly. Ny fotsy alumina vokarina any titling herinaratra Arc lafaoro lehibe manana ny advantag ...
Ny karazana solon-abrasive.3 oxidation 2 aluminium (Al2O3) afa-po ny 98%, ary ny fanaovana toy ny misy vola kely ny ferric azôty, silisiôma azôty, appera fotsy.
aluminium fotsy azôty karazana refractories kilasy ambony, no nanaovana ny avo lenta alumina amin'ny mitsonika ambony 2000 amin'ny aluminium azôty herimpo herinaratra Arc memy sy hihena. Tsy fotsy ny dingana lehibe alphaAl2O3 krystaly. Ny fotsy alumina vokarina any titling herinaratra Arc lafaoro lehibe manana ny tombony azo amin'ny ampahany ambony sy ambany hakitroky porosity ary ny boky sy ny fahamarinan-toerana mafana fanoherana dona azo kokoa.
herimpo size: 12 # -220 #
1. Ceramic ambonin'ny fitsaboana
3. Fitotoana Vary / Nikosokosoka
Sarobidy ny famaritana (%)
hakitroky ny tena
afa-po ny andriamby fananana
Nampikambana abrasives sy mifono abrasives
1.lapping, Nikosokosoka, haingon-trano tsy skid kapila tanimanga, ary ny tsindry fanapoahana.
3.Surface fitsaboana / nahavita
4.Anti-Skid Manome filazalazana
5.Ceramic taila seramika manokana
6.Fluidized Bed fatana fandoroana ka Skin / Dental Care
7.grinding karbaona avo vy, haingam-pandeha sy ny vy hipoaka vy
Previous: Copper Shot / Copper Cut Wire Shot
Sand vary main'ny rivotra Medium